आइपीएल इतिहासमा धेरै बलको सामना गर्ने ३ क्रिकेटर - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएल इतिहासमा धेरै बलको सामना गर्ने ३ क्रिकेटर
काठमाडौंः १३ औँ सिजनको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) सुरु हुन धेरै समय बाँकी छैन । आइपीएलको आसन्न सिजन २९ मार्चदेखि सुरु हुँदैछ । आइपीएल २०२० को खेल तालिकासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । तालिका अनुसार उद्घाटन म्याचमा मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किंग्स खेल्ने छन् । यी दुई टीमबीचको उद्घाटन म्याच २९ मार्चमा मुम्बईमा हुनेछ ।
विश्व क्रिकेटको सर्बाधिक लोकपिय लिग आइपीएलमा हरेक वर्ष विभिन्न कीर्तिमान बन्दै आएका छन् । विश्व क्रिकेटका स्टार खेलाडीको सहभागिता रहने भएकाले आइपीएल हेर्नुको मजा नै बेग्लै हुन्छ । चौका–छक्काको वर्षा हुने यो लिगमा कयौं खेलाडीले विभिन्न उपलब्धि पनि हासिल गर्छन् । यसैबीच आज आइपीएल इतिहासमा सर्बाधिक बलको सामना गर्ने तीन अनुभवी ब्याट्सम्यानको बारेमा चर्चा गर्दैछौं–
याे पनि पढ्नुस आईपीएल : केकेआरले दियो राजस्थानलाई १७५ रनको लक्ष्य
१. विराट कोहलीः आइपीएलमा विराट कोहली रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर (आरसीबी) को नृतेत्व गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विराट सफल कप्तानमा रुपमा चिनिन्छन् । तर, आइपीएलमा भने कप्तानको रुपमा उनको ‘रेकर्ड’ सफल बन्न सकेको छैन । कोहली हालसम्म एकै टिमबाट आइपीएल खेल्ने एक मात्र खेलाडी हुन् ।
१२ औँ सिजनसम्म आइपुग्दा काेहलीले १ सय ७७ म्याचको १७९ पारी खेलेका छन् । यती म्याच खेल्दा उनले ४ हजार १ सय १२ बलको सामना गरेका छन् । यसक्रममा कप्तान कोहलीको स्ट्राइक रेट १३१.६२ रहेको थियो । उनले आइपीएलमा ५ हजार ४ सय १२ रन बनाएका छन् । हालसम्म कप्तान कोहलीले आइपीएलमा ५ शतक र ३६ अर्धशतक बनाइसकेका छन् ।
२. सुरेश रैनाः ३३ वर्षीय सुरेश रैनाले आइपीएल करियरको सुरुवात चेन्नई सुपर किंग्स (२००८) बाट गरेका थिए । पछि उनी आइपीएलको आठौं सिजनमा गुजरात लायन्सको कप्तान पनि बने । सन् २०१८ मा फेरि रैना चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) मा फर्किए । उनी सीएसकेका उपकप्तान पनि हुन् ।
आइपीएलमा रैनाको नामा थुप्रै कीर्तिमान छन् । उनले १९३ आइपीएल म्याचमा ३ हजार ९ सय १५ बलको सामना गरेका छन् । रैनाले १३७.११ को स्ट्राइक रेटका साथ आइपीएलमा ५ हजार ३ सय ६८ रन बनाइसकेका छन् । आइपीएलमा उनको नाममा एक शतक र ३८ अर्धशतक छ ।
३. रोहित शर्माः अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा विस्फोटक ब्याटिङ गर्ने भारतीय टीमका उपकप्तान रोहित शर्मा आइपीएलमा मुम्बई इन्डियन्सको कप्तानी गर्छन् । उनी आइपीएलका सबैभन्दा सफल कप्तान हुन् । रोहितले नै नेतृत्व गर्ने मुम्बईले हालसम्म सबैभन्दा बढी ४ पटक उपाधि जितसकेको छ ।
राेहितले आइपीएलमा १ सय ८८ म्याच खेलेका छन् । १ सय ८८ म्याचको १८३ पारीमा उनले ३ हजार ७ सय ४४ बल खेलेका छन् । रोहितले १२ औँ सिजनको आइपीएलसम्म १३०.८२ को स्ट्राइक रेटमा ४ हजार ८ सय ९८ रन बनाएका छन् । आइपीएलमा उनले एक शतक र ३६ अर्धशतक पनि बनाइसकेका छन् ।
ट्याग्स: आइपीएल, इन्डियन प्रिमियर लिग, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना